मनकारी जुजुकाजी र मान्छेहरूको मानवता - Blogs of Sagar Prasai
मनकारी जुजुकाजी र मान्छेहरूको मानवता
Celebrating Aditi's birthday at Heartbeat with Jujukaji and his Kids
स्थानः दरवारमार्ग, काठमाण्डौ | समयः दिनको २ बजे
मेरो मोबाईलको घण्टी बज्यो। उताबाट आवाज आयो- "हामीले केक ल्याईसक्यौँ। बच्चाहरू आईसके। तपाईँ कति बेला आईपुग्ने?"
मैले भने- "अब १५ मिनेटमा आईपुगछु।"
अनि म लागे ज्ञानेश्वर तिर। मेरो गन्तव्य थियो जुजुदाई कार्यालय- हर्टबिट।
मैले दश दिन अगाडी सडक बालबालिकाको लागी सहयोग गर्ने जुजु काजी दाईलाई ती बच्चाहरूलाई स्विटर किन्दिनको लागी ३००० रुपैया दिएको थिए। त्यसदिन बेलुका मेरो साथीले भन्नुभयो कि तिमीले यसरी सहयोग गरेको कुरा फेसबुकबाट लेख्यौ भने अरु धेरै मान्छेहरू पनि त सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई उनको कुरा राम्रो लाग्यो र मैले मेरो एउटा स्टाटस जुजुकाजी महर्जन र उनका प्यारा सडक बालिकाको बारेमा लेखे।
त्यसपछि मेरो साथीले भन्नुभएको जस्तै भयो। सुरूमा दुबईमा सृजना मल्ल भन्ने मेरो फेसबुकमा मित्र रहनु भएकी दिदीले जुजुदाईलाई १०००० (दश हजार) पठाईदिनु भयो। जुजुदाईले ती बालबालिकाहरू लाई स्कुल पठाउन थाल्नु भएको रहेछ। उनीहरूलाई ज्याकेट, स्विटर, जुत्ता, स्टेसनरी आदि किन्दिनु भयो।
त्यसको केहि दिन पछि- ईजरायलमा रहनु भएकी मेरी सानीमा मैना सुबेदी (श्रेष्ठ) ले मलाई फेसुबुकमा म्यासेज पठाएर भन्नुभयो- "सागर। मेरी छोरी अदितीको जन्मदिन आउदै छ। तैले अस्ति जुजुकाजीको बारेमा लेखेको कुराले मेरो मन छोयो। छोरीको जन्मदिन उसका उमेरका तिनै बच्चासँग मनाईदे न।" अनि वहाँले मेरो खातामा १०००० (दश हजार) पठाईदिनु भयो।
त्यहि भएर आज हामी हर्टबिटमा अदितिको जन्मदिन तिनै बच्चासँग मनाउन भेला हुदै थियौ। म त्यहाँ म पुग्दा ९-१० जना बच्चाहरू खेल्दै थिए। तिनीहरू नुहाएर नया लुगा आएर सफा थिए। जुजुदाईले भन्नुभयो- सबैलाई लुगा, चप्पल किनिदिएको छु। त्यसपछि हामीले सबै भन्दा सानो बच्चालाई "ह्याप्पी बर्थडे अदिति" भनेर लेखिएको केक काट्न लायौँ अनि सबैले बाडेर खायौँ। बच्चाहरू गित गाए, बादल बजाए रमाईलो गरे। त्यसपछि जुजुदाईले सबैलाई मोमो खुवाउनुभभयो। बच्चाहरू रमाईलो मानेर खाए। मैले त्यो भन्दा रमाईलो मानेर हेरेँ।
म फर्कने बेलामा जुजुदाईले हात मिलाएर भन्नुभयो- तपाईले गरेर धेरै ठुलो सहयोग भयो।
मैले भने- मैले होईन दाई। तपाईको असलता हो।
जुजुदाई हाँस्नुभयो। बिदा हुने बेलामा भन्नुभयो- तपाईको आन्टीलाई भन्दिनुस् आजको पैसाले यी केटाकेटीलाई केही समयलाई भएपनि ठुलो सहयोग गर्नेछ।"
मैले भने- त्यस पछि नि।
वहाँले हाँस्दै भन्नुभयो- त्यसपछि फेरी तपाईले स्टाटस लेखिदिनु पर्छ।
हामी दुवै हाँस्यौ र म बिदा भएँ।
घर फर्कदा मेरो मनमा एउटा प्रश्न आयो- के फेसबुकमा स्टाटस लेखेर नै जुजुदाईलाई सहयोग आएको हो त? निकै बेर सम्म सोचे पछि मैले एउटा निष्कर्ष निकाले- फेसबुकले मान्छेहरू सम्म कुरा पर्याउन केहि हद सम्म सहयोग गर्यो होला। तर त्यो भन्दा ठूलो कुरा- जुजुदाईले यी केटाकेटीलाई सहयोग गरेको वा वहाँलाई यी सबै सहयोग हरू आएको भनेको हामी सबैमा रहेको मानवताले गरेर आएको हो।
मैले पहिला कतै पढेको थिए- मान्छे त जन्मन्छन् मर्छन्, त्यो सामन्य कुरा हो। तर मानवता मर्नु हुदैन। म आज यो सम्झेर खुशी भए- कि हामीमा अझै मानवता मरेको छैन।